Tun Tun's Photo Diary: Semporna, Malaysia #5
2013-Apr-01, Semporna က နေ Sea Gipsy ရွာတွေကို လည်တာ တတိယမြောက်နေ. နဲ. နောက်ဆုံးနေ.ပါ။ ထုံးစံ အတိုင်းပဲ မနက်စာစားပြီး Speed boat လေးနဲ. Semporna ကနေ စတင်ထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။ ကနေ.တော့ ဖုန်းနဲ. ဓါတ်ပုံ မရိုက်နိုင်တော့ဘူး။ မနေ.က ရေထဲကျပြီးတော့ ပျက်သွားပြီ။ ဆန်နဲ. ထည့်ထားတာလဲ မရဘူး။ စင်ကာပူရောက်မှ သွား ပြင်ရဦးမယ်။ ဖုန်းထဲမှာ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ ပျက်သွားရင်တော့ နှမြောစရာကြီး။
တရက် နဲ. တရက် သွားလည်တဲ့ ရွာတွေက မတူပါဘူး။ စုစုပေါင်းရွာတွေ ဘယ်လောက်ရှိလဲ၊ လူဦးရေ ဘယ်လောက်ရှိလဲ စာရင်း အတိအကျရှိရဲ.လား မသိဘူး။ အခုရောက်နေတဲ့ နေရာကတော့ ကမ်းနဲ.ဝေးပါတယ်။ လုံးဝ ပင်လယ်ထဲမှာပါ။ အဲဒီနေရာ ရောက်နေတုန်း မိုးအုံ.လာလို.၊ ဒီလိုနေရာမှာ မုန်းတိုင်း (သို.) Tsunami သာ ဖြစ်ခဲ့ရင် တော်တော် ကြောက်စရာ ကောင်းမှာပဲလို. တွေးမိတယ်။
ကလေးမလေး ဟိုဘက်အိမ်နဲ. ဒီဘက်အိမ် ကို ကူးနေတယ်။
ဒါကတော့ သူတို. မိသားစုတွေ နေတဲ့ အိမ်လေး ထင်ပါတယ်။ ညဆို ဘယ်လို အိပ်ကြသလဲ မသိဘူး။ မိုးရွာရင် မိုးကောလုံပါ့မလား?
ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ဒီအိမ်ပေါ်ကို တက်ကြည့်ခဲ့တယ်။ အိမ်ပေါ်ကလူတွေ ထမင်းစားချိန်နဲ. သွားတိုးတယ်။ သူတို.တွေ ခေါက်ဆွဲပြုတ် စားနေတာပါ။ ဇွန်းတွေ ၊ တူတွေ နဲ.တောင်မစားဘူး၊ ပန်းကန်လိုက် မော့ထည့်လိုက်တာပဲ။
ဒီ ညီအစ်မ နှစ်ယောက်က ပို.စ်ပေးတာ တော်တယ်။ ပြီးတော့ သူ.တို.ပုံတွေ ကိုပြန်ကြည့်ရင်း အရမ်းကို သဘောကျနေကြတယ်။ အောက်က ပုံလေးက ဒီခရီးစဉ်ထဲမှာ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး ပုံ တပုံပါ။ ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲတွေမှာလဲ ၀င်ပြိုင်ဖူးပါတယ်။
သူတို.ကို နူတ်ဆက်ပြီး နောက်ထပ် တစ်နေရာ သွားပါတယ်။ အဲ့နေရာကတော့ Diving လုပ်တဲ့သူတွေ သွားတဲ့ နေရာပါ Pulau Mabuh Island ပါ ။ Sipadan-Mabul Resort လဲရှိပါတယ်။
ဒီ Palau Mabul island မှာ ရွာကလေး နဲ. Resort နဲ. ရှိတာကိုတွေ.ရတယ်။ Resort က တည်းချင်စရာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဆောက်ထားတယ်။ Resort နဲ. ရွာနဲ. တွဲမြင်ရတော့ ၊ လူနေမူ အဆင့်အတန်း ကွားခြားတာကို ယှဉ်ပြ ထားသလိုခံစားရတယ်။
Diving လုပ်မယ့်သူတွေကို ဒီမှာ ၀တ်စုံအပြည့်နဲ. Training ပေးနေပါတယ်။ ပြီးမှ Diving လုပ်မယ့် နေရာကို သွားကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို.ကတော့ သူတို.နားမှာ Snorkeling လုပ်ပါတယ်။ ရေအောက်ထဲမှာ ငါးတွေ နဲ. ကျောက်ခက်ပန်းတွေ အရမ်းလှပါတယ်။
ဒါကတော့ ရွာထဲက Casino ပါ။ ကလေးရော၊ လူကြီးရော လောင်းကစားလုပ်နေကြတယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော့် တို. ၃ရက်လုံး စီးခဲ့တဲ့ Speed boat လေးပါ။ ဘေးဆုံးက အကျီင်္ အပြာ၊ ဘောင်းဘီ အတို အနက်ရောင် ၀တ်ထားတဲ့ သူက ကျွန်တော်ပါ။း)
Palau Mabul က အပြန် ကျွန်းသေးသေးလေး တခုကို ၀င်ခဲ့သေးတယ်။ အဲ့ကျွန်းပေါ်မှာ ကုန်စုံဆိုင် တဆိုင်တွေ.ခဲ့တယ်။ ကျွန်းပေါ်မှာ အလွန်ဆုံးရှိလှ အိမ် ၁၀အိမ်လောက်ပဲ။
အကျီင်္ ခေါင်းပေါ်မှာ ခြုံထားတဲ့သူက ဒီရွာက ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို. ကလေးတွေကို ချိုချဉ်တွေ ဝေလိုက်လို.၊ သူ.စီးပွားရေး ထိခိုက်သွားမလား မသိဘူး။း)
နောက်ဆုံးမှာတော့ ကျွန်တော်တို. Semporna ဘက်ကို ပြန်ပါတယ်။ ခရီးစဉ်တွေ အားလုံးပြီးသွားပါပြီ၊ ဒါပေမယ့် ချိုချဉ်တွေ အများကြီး ကျန်နေသေးလို.၊ လှေဆရာ က Semporna နားက ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်လို နေရာ တခုကို ပို.ပေးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို. ရောက်လာတာ ကြားတော့ ရွာထဲက ကလေး၊ လူကြီး တွေ အလျှိုလျှို ထွက်လာကြတယ်။ သူတို.က တံတားပေါ်မှာကျွန်တော်တို.က လှေပေါ်မှာပါ။ လှေပေါ်ကနေ ချိုချဉ်တွေ ပစ်ပေးပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ပိုက်ဆံကျဲ သလိုပေါ့ ။ တော်တော်ပျော်ဖို.ကောင်းပါတယ်။
ချိုချဉ်တွေကို ပစ်ပေးတာ ကို ဖမ်းနေကြတာပါ။ အင်မတန်ပျော်ဖို.ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုရင်လဲ သူများ အဲ့လိုလာ ကျဲရင် ကောက်မှာပဲ။း)
ချိုချဉ်တွေ ကျဲပြီးတော့ Hotel ပြန်ပါတယ်။ Semporna မှာ အခုလို ရွာတွေ လျှောက်လည်တာ Diving လုပ်တာက လွဲလို. တခြား ဘာမှ လုပ်စရာ မရှိဘူး။ Night life လဲ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ထမင်းစားထွက်တာကလွဲပြီး၊ ကျန်တဲ့ အချိန်တွေက ဟိုတယ်မှာပဲ နေရပါတယ်။
2013-Apr-02, မနက်ဖြန် မနက် ဟိုတယ်ကနေ Tawau လေဆိပ်ကို Taxi နဲ. သွားရမှာပါ။ ပြီးရင် Tawau ကနေ ၊ Kota Kinabalu ကို လေယာဉ်စီး။ ပြီးတော့ Kota Kinabula ကနေ Singapore ကို လေယာဉ်ထပ်စီးရမှာပါ။ ဒါကြောင့် Semporna လိုနေရာမျိုးကို ရောက်ဖို.က မလွယ်ဘူး၊ စိတ်ရှည်မှ၊ ပြီးတော့ အခုလို ၀ါသနာချင်းတူတဲ့ အဖွဲ.နဲ. သွားမှ အဆင်ပြေတယ်။ အဖွဲ.ခေါင်းဆောင်က မလေးရှား လူမျိုးဆိုတော့ သွားရတာ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့။ ဒီခရီးစဉ် က သွားဖူးသမျှ ခရီးတွေ နဲ. ယှဉ်ရင် ပိုပြီးတော့ စွန်.စားရတဲ့ ခရီး၊ စိတ်ဝင်စား ဖို. ကောင်းတဲ့ ခရီးတခုလို. ပြောလို.ရတယ်။
စင်ကာပူ ပြန်ရောက်တော့ ဖုန်းပြင်ဖို. ဆိုင်တွေ လိုက်မေးရပါတယ်။ အရင်ဆုံး Samsung service center ကို သွားပြတော့ ရေထဲကျတာ ဖြစ်လို. Warranty မရပါဘူး၊ ပြင်ခ S$700 လောက်ကျပါမယ်တဲ့။ ဖုန်းအသစ်မှ S$700 ကျော်လောက်ပေးရတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်သူက ရူးနေလို. S$700 ပေးပြီးပြင်မှာလဲ။ ဒါနဲ. တခြား ဖုန်းပြင်တဲ့ ဆိုင်တွေကို လိုက်မေးပါတယ်။ နောက်ဆုံး တော့ ဆိုင်တဆိုင်မှာ S$350 နဲ. ပြင်လိုက်ပါတယ်။ နှမြောတော့ နှမြောတယ် ဒါပေမယ့် ဖုန်းထဲက ဓါတ်ပုံတွေ ပြန်လိုချင်တော့လဲ မတက်နိုင်ဘူးလေ။ ဖုန်းထဲက ဓါတ်ပုံတွေ ပြန်ကူးပြီးတော့ ၊ အဲ့ဖုန်းကို Second hand ဖုန်းဝယ်တဲ့ဆိုင်မှာ S$650 နဲ. ပြန်ရောင်းစားလိုက်တယ်။ အရှုံးထဲက အမြတ်ပေါ့။း)
Semporna ပို.စ်ကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ နောက်ပို.စ်တွေ ဆက်ရေး ပါဦးမည်။
at 3/06/2016 12:52:00 AM
Really interesting place and nice photos. Thanks for the post.
Samsung Galaxy Note20 Ultra Camera Review